twentytwo | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်း ၃ ပတ်အတွင်းမှာ လူပေါင်း ၇ဝဝ ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆီကို လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းမှအားပိုကောင်းလာပြီး အပူပိုင်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာတဲ့ 22W ဦးတည်လာနေပြန်ပြီဖြစ်ကြောင်း Bloomberg အင်တာနက်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဖိလစ်ပိုင်စံတော်ချိန် နံနက် ၈နာရီမှာ အဲဒီ မုန်တိုင်းဟာ ဂူအမ်ကျွန်းတောင်ဘက် ၂၁၃ ကီလိုမီတာ(၁၃၃ မိုင်) မှာဗဟိုပြုနေတယ်လို့ သတင်းရေးသားသူ Aaron Sheldrick က ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ မုန်တိုင်းဟာ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီကို ၃၅ ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားနေကြောင်း၊ လာမဲ့ ၄၈ နာရီအတွင်းမှာ တစ်နာရီကို ၁၂ဝ ကီလိုမီတာ(၇၅ မိုင်) နှုန်းရဲ့အထက်နဲ့ တိုက်ခတ်မဲ့ အဆင့်-၃ (CAT-3) တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ကြောင်း JTWC ခန့်မှန်းချက်မှာဖေါ်ပြထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာရင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၁၇၈ မှ ၂ဝ၉ ကီလိုမီတာ (၁၁ဝ မိုင်မှ ၁၃ဝ မိုင်နှုန်း) အထိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ National Disaster Coordination Council(NDCC) မှတ်တမ်းများအရ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်း ၃ ပတ်အတွင်းမှာ မုန်တိုင်း PARMA ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ ၃၇၄ ဦးနဲ့ ၅၂ ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ လူပေါင်း ၉၇ဝဝဝ ကို ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများဆီမှာ စောင့်လျှောက်ထားရကြောင်း၊ PARMA ရံ့ ရှေ့က မုန်တိုင်း KETSANA ကြောင့် ၃၃၇ ဦးသေဆုံးပြီး ၃၇ ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကာ၊ လူပေါင်း ၂၁၆ဝဝဝ ကို ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဆီမှာ စောင့်လျှောက်ထားရဆဲ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီတစ်ခါ 22W ထပ်ဝင်လာဦးမဲ့အရေး ရတက်မအေးဘဲ ရှိနေကြရကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
WUND –5Days Forecast image
Download PDF post for 15OCT-1500-mmtime-22W
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: tropical-storm, twentytwo, weather. 1 Comment »
ဖိလစ်ပိုင်ကိုခြိမ်းခြောက်ဦးမည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 22W TWENTY-TWO
လက်ရှိအချိန်မှာ မနီလာမြို့ရဲ့ အနောက်ဘက် မိုင် ၁၆ဝဝ ခန့်၊ ဂူအမ်ကျွန်းရဲ့တောင်ဘက် မိုင် ၉ဝခန့် မှာ စတင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁၉ မိုင်နှုန်းနဲ့ မြန်မြန်ရွေ့လျားနေပါတယ်။
JTWC data ကို ပုံဖေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ လာမဲ့ ၁၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ နံနက် ၆ နာရီခွဲ 00:00GMT မှာ မနီလာမြို့ရဲ့ အနောက်ဘက် မိုင် ၈၅ဝ ခန့်ကို အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့် (Tropical Storm) နဲ့ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီကို ၆၅ နော်တီကယ်မိုင်မှ ၈ဝ နော်တီကယ်မိုင် (၇၅ မိုင် မှ ၉ဝ မိုင်နှုန်း) အထိ ရှိလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
JTWC data ကို ပုံဖေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ လာမဲ့ ၁၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ နံနက် ၆ နာရီခွဲ 00:00GMT မှာ မနီလာမြို့ရဲ့ အနောက်ဘက် မိုင် ၈၅ဝ ခန့်ကို အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့် (Tropical Storm)အနေနဲ့ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီကို ၆၅ နော်တီကယ်မိုင်မှ ၈ဝ နော်တီကယ်မိုင် (၇၅ မိုင် မှ ၉ဝ မိုင်နှုန်း) အထိ ရှိလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
အခုအချိန်အထိ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေရဆဲဖြစ်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွက်တော့ နောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ အာရိုယို ကတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ ရာသီဥတုပြောင်းမှုနဲ့ ကမ္ဘကြီးပူနွေးလာမှုကိုခံရတဲ့ သားကောင်ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အင်တာနက်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
mmweather မှ ပူပူနွေးနွေးဖြစ်ကာစ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 22W ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပြီး သတင်းများတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား ။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: tropical-depression, twentytwo, weather.3Comments »